एनआरएनएलाई एनसीसी चुनावको चटारो - Karobar National Economic Daily
एनआरएनएलाई एनसीसी चुनावको चटारो
query_builderSeptember 6, 2017 9:50 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility208
काठमाडौं : गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशनका लागि विभिन्न देशका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) को निर्वाचन धमाधम भइरहेको छ ।
एनआरएनए एनसीसीको अमेरिका, युरोप र एसिया क्षेत्रको चुनावलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन असोज २५, २६ र २७ गते काठमाडौंमा हँुदैछ ।
एनआरएनएले हालसम्म विश्वभर ७५ भन्दा बढी देशमा आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि विभिन्न देशमा भएका निर्वाचनको परिणामबारे समाचारहरु प्राप्त भइरहेका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जापानको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । अनलाइन भोटिङमार्फत गरिएको निर्वाचनमा ७२ प्रतिशत अर्थात् ७ हजार ५०३ मत खसेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचनबाट अध्यक्षमा टासी वाङ्दी लामा, उपाध्यक्षमा शिव प्रसाद पौडेल र सरोज कुमार खत्री, छत्रबहादुर दाहाल र द्रोण प्रसाद सिलवाल र जीवन न्यौपाने विजयी भएका छन् । यस्तै सचिवमा जनक कुमार शाही र वासुदेव लामिछाने चयन भएका छन् ।
महिला सदस्यमा सिर्जना पाण्डे विजयी भइन् भने महिला सदस्यतर्फ गीता आचार्य र कमला गैरे छनोट भएका छन् । त्यस्तै सदस्यमा हस्त लामा, बालकृष्ण कँडेल हिमाल, लालबहादुर रावल आशिष, नारायण खड्का र राजन पौडेल विजयी भएका छन् । अन्य पदाधिकारीहरू उत्तमकुमार श्रेष्ठ, अस्मिता लामा वाइवा, नरेन्द्रराज सापकोटा रहेका छन् ।
यसैगरी कुमार कार्की, राजु पनेरु, डिलाराम गैरे, चेतराम गैरे चेतन, सुरेश रेग्मी, टिकाराम कँडेल, सोमनाथ लम्साल विजयी भएका छन् । यस्तै, जगतबहादुर खड्का, दयाराम खरेल, दिनेश लोहनी, विक्रम खत्री, श्याम गोपाल कँडेल र डिल्लीराम सिवाकोटी रहेका छन् ।
एनआरएनए तान्जानियाको अध्यक्षमा थापा
तान्जानियाको दार ए सलाममा सम्पन्न गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) को चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्षमा रोशन थापा, उपाध्यक्षमा प्रेम गुरुङ र विनोद पटेल र महसचिवमा पुष्प राज भट्टराईलगायत ११ सदस्य नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ ।
यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय समिति सदस्यमा सञ्जीत थापा तथा महिला संयोजक अन्जली तामाङ र युवा संयोजकमा दीपक लामिछानेलाई निर्वाचित गरिएको छ ।
एनआरएनए माडागासकरको अध्यक्षमा शिवराज कँडेल
अफ्रिकी मुलुक माडागासकरले एनआरएनएको नयाँ नेतृत्व पाएको छ । राजधानी अन्टानानारिभो, इभातु होराइजनमा हालै सम्पन्न दोस्रो साधारण सभाले शिवराज कँडेलको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको हो ।
साधारणसभाले उपाध्यक्षमा दानबहादुर थापा, महासचिवमा होम श्रेष्ठ, सचिवमा मर्क गुरुङ र कोषाध्यक्षमा पूर्णबहादुर खड्कालाई चयन गरेको छ । यसैगरी सदस्यहरू रामेश्वर राणा, तेजबहादुर कार्की, ईन्द्रबहादुर खत्री, सुवास आले मगर, दीपेन्द्र खतिवडा, धनराज सवा लिम्बु, हिमबहादुर बुढाथोकी र पेम्बा शेर्पा चयन भएका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय समिती सदस्यमा रमेश राईलाई चयन गरिएको छ ।
त्यस्तै सल्लाहाकारमा कर्णशेर राई, आङ गेलजी शेर्पा, चन्द्रबहादुर खड्का लगायत १३ सदस्य नयाँ कार्यसमिति दुई वर्षका लागि चयन गरिएको छ । गैरआवासिय नेपाली संघ माडागासकर स्थापना २०१५ मा भएको थियो ।
नाइजेरियाको अध्यक्षमा जनक विष्ट
गैरआवासीय नेपाली संघ नाइजेरियाको छैटौं राष्ट्रिय अधिवेशन नाइजेरियाको लेगोसमा सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनले जनक बिष्टको नेतृत्वमा संघको नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ ।
उपाध्यक्षहरूमा विश्वास पौडेल, वीरेन्द्र गुप्ता, उर्मिला रोका, महासचिवमा रोशन थापा, कोषाध्यक्षमा रोहित भांगर, सचिवमा अभिषेकमान सिंह र भरत रिजाल, महिला संयोजकमा अन्जु पौडेल, युवा संयोजकमा ईन्द्र टन्डन निर्वाचित भएका छन् । यस्तै, सदस्यहरूमा प्रकाश अर्याल, रुद्र दर्लामी मगर, आरती न्यौपाने टण्डन, मदन बोहोरा, उत्तम पौडेल, सारिका क्षेत्री र सन्तोष योगी निर्वाचित भएका छन् ।
अधिवेशनले चिरञ्जीवी रोकालाई अन्तर्राष्ट्रिय समितिको सदस्यमा मनोनयन गरेको छ भने प्रमुख सल्लाहकारमा हिक्मत थापा, सल्लाहकारहरूमा चिरञ्जीवी रोका, डा. ताराप्रसाद श्रेष्ठ, राजेन्द्र मुल्मी र मन थापालाई चयन गरेको छ ।
कतारको अध्यक्षमा नगेन्द्रप्रसाद पोखरेल
एनआरएनए कतारमा नगेन्द्रप्रसाद पोखरेलको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको छ । पोखरेलले ८ सय ५९ मत पाएका थिए । निर्वाचन अधिकृत कमलमणि गुरागार्इंका अनुसार कतारबाट अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको सदस्यमा विमल सुवेदी र कुमार कार्की विजयी भएका छन् ।
प्रथम उपाध्यक्ष तेज कटुवाल, द्वितीय उपाध्यक्ष सुदर्शन भट्ट, तृतीय उपाध्यक्ष केशव ढकाल र महासचिव बुधवल गुरुङ विजयी भएका छन् । सचिवमा रामजी खत्री र युवराज शर्मा र सहकोषाध्यक्षममा खगबहादुर खत्री विजयी भएका छन् । खुल्ला सदस्यमा चिरञ्जीवी तिम्सिना, टंककुमार खड्का, विजयराज अधिकारी, विनोदप्रसाद वस्यौला, रुद्रप्रसाद आचार्य र रेशमबहादुर वस्नेत विजयी भएका छन् ।
यसअघि कोषाध्यक्ष उत्तम गुरुङ, महिला संयोजक सरिता गुरुङ, युवा संयोजक लोकमाया क्षेत्री र महिला सदस्य सपना पुन, प्रदेश ६ मा वसन्त कुवर र प्रदेश ७ मा नरेशप्रसाद जैशी, मुस्लिम सदस्यमा शेख अब्दुल खालिक, मोहम्मद उज्जेर, आदिवासी जनजातिमा श्यामकुमार लिम्बू र रामबाबु मण्डल, दलितमा भिम सुनार र छविलाल सूचीकार र तराई मधेसमा वली ठाकुर र विश्वनाथ ठाकुर हजाम निर्विरोध चयन भएका थिए ।
बेल्जियम अध्यक्षमा लोक दाहाल
गैरआवासीय नेपाली संघ बेल्जियमको अध्यक्षमा लोक दाहाल निर्वाचित भएका छन् । आफ्नो प्रतिस्पर्धी सन्तोष श्रेष्ठ (सुवास) लाई २ सय ४२ मतले पछि पार्दै दाहाल विजयी भएका हुन् ।
सेप्टेम्बर ३ मा भएको सो निर्वाचनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा कमल पन्थी विजयी भएका छन् भने प्रथम उपाध्यक्षमा गोविन्द सिंखडा निर्विरोध चयन भएका थिए । अन्य दुई उपाध्यक्षमा योगिता थापा र खडक केसी विजयी भएका छन् । महिला उपाध्यक्षमा अनुजा प्रधान निर्विरोध चयन भएकी थिइन् । महासचिवमा कोषाध्यक्षसमेत रहेकी आङमाया लामा शेर्पा निर्वाचित भएकी छन् ।
कोषाध्यक्षमा रोशन गुरुङ, सचिवद्वयमा प्रेम तिमल्सिना र जीवन शर्मा चयन भएका छन् । छैटौं अधिवेशनले महिला सचिवमा मुना ताम्राकारलाई निर्वाचित गरेको छ । महिला संयोजकमा हरि भट्टराई, युवा संयोजकमा रविन पण्डित, कार्यकारी सदस्यहरूमा चीज कुमार श्रेष्ठ विजयी भएका छन् । सदस्यहरूमा राजु घिमिरे, कुल बहादुर धर्ती, किरण पुन, दीपक न्यौपाने, आङ्बाबु शेर्पा, मिन दोर्जे थापालाई दुई वर्षको लागि निर्वाचित गरेको छ ।
रुस अध्यक्षमा गौतम
मस्कोस्थित रसियाली जनमैत्री विश्वविद्यालयको इन्टरक्लबको प्रेक्षालयमा गैरआवासीय रूस राष्ट्रिय समन्वय परिषदको आठौं राष्ट्रिय अधिवेशन सम्पन्न भएको छ ।
आठांै अधिवेशनले रामेश्वर गौतमको अध्यक्षताका नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । नयाँ कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा सुमन रिजाल, शिवमणि भुर्तेल, महासचिव रोशनकुमार पोखरेल, कोषाध्यक्ष गोविन्द आचार्य निर्वाचित भएका छन् ।
यसरी नै इन्द्रप्रसाद भुषाल सचिव, पविता उपाध्याय नारी–संयोजक, किरण रानाभाट युवा–संयोजक र बुद्धिप्रसाद तिवारी, दुर्गाबहादुर भट्टराई, धनराज मोक्तान, पशुपति घिमिरे, हिमलाल खनाल कार्यकारी सदस्य तथा डा. एकनारायण चापागाईं केन्द्रीय सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
पोर्चुगलमा ५० को उम्मेदवारी
गैरआवासीय नेपाली संघ पोर्चुगलको आगामी कार्यकालका लागि करिब ५० जना उम्मेदवारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
आगामी १० सेप्टेम्बरमा हुने छैटांै महाधिवेशनको संघारमा आगामी कार्यकालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्देखि सदस्यसम्मको पदमा सो संख्याको उम्मेदवारी दर्ता भएको पोर्चुगलको निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघको विधानमाकुनै पनि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा पञ्जीकृत सदस्य संख्याको आधारमा आईसीसी सदस्यका लागि कोटा तोकिएको छ । यसअन्तर्गत १ हजार पञ्जीकृत सदस्य संख्यालाई १ जना आईसीसी सदस्य तोकिने व्यवस्था भएअनुसार यस पटक पोर्चुगलको हकमा उक्त पञ्जीकृत सदस्य संख्या बढेर २ हजार ३४५ पुगेको छ, जसले गर्दा एनसीसी पोर्चुगलबाट २ जना आइसीसी सदस्य जाने निश्चित भएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ पोर्चुगलको आन्तरिक विधानअनुसार ३ जना उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला उपाध्यक्ष अनिवार्य गरिएको छ भने अन्य सदस्य संख्या मनोनित गर्ने व्यवस्था छ ।
यसरी एनसीसी पोर्चुगलमा अध्यक्षसहित ३ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, १ सचिव, १ कोषाध्यक्ष, १ महिला संयोजक, १ युवा संयोजकसहित अन्य ८ जना सदस्यसहित जम्मा १७ सदस्सीय कार्यसमिति (मनोनित बाहेक) पदमा करिब ५० जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।
एनआरएनए गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशन